Sawirro: Axmed Madoobe iyo Mucaaradkii is bedel doonka oo si weyn loogu soo dhoweeyay Kismaayo - Jowhar Somali Leader
Home Somali Sawirro: Axmed Madoobe iyo Mucaaradkii is bedel doonka oo si weyn loogu...
Sawirro: Axmed Madoobe iyo Mucaaradkii is bedel doonka oo si weyn loogu soo dhoweeyay Kismaayo
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ay wehelinayaan Xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir oo ka mid ah xubnaha isbadal doonka Jubbaland ee dhawaan heshiiska la gaaray Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaalada kismaayo.
Iyadoo la ilaalinayo badqabka Bulshada waxaa Madaxweynaha iyo xubnaha kale ee safarka ku wehelinayay ay mareen baaritaan Caafimaad, iyadoo Madaxweyne Axmed Madoobe uu xariga ka jaray qaybo Cusub oo lagu kordhiyay garoonka Diyaaradaha Kismaayo ee Sayid Maxamed Cabdille Xasan.
Madaxweyne Axmed Madoobe oo Saxaafada kula hadlay qaybta nasashada garoonka diyaaradaha ayaa sheegay inuu si wanaagsan ku soo dhamaaday heshiiskii ay dhawaan gaareen xubnaha golaha isbadal doonka iyo Xukuumadda Jubbaland, isagoo hoosta ka xariiqay in danta shacabka ay ku jirto heshiiskaas oo aan shaqsi loo danaynin balse shacabka loo turay.
Waxaa uu sheegay in shacabka Jubbaland ay wadajir iyo Midnimo ku gaari karaan Hormar guud taas oo ay qayb ka tahay in wixii lagu kala aragti duwanaado wada hadal lagu xaliyo.
Sidoo kale waxaa uu intaa ku daray in heshiiska uu u dhexeeyay Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo xubnihii saluugay Doorashadii Sanadkii hore isla markana diyaar ay u yihiin in wixii dhiman la dhamaystiro isla markana laga shaqeeyo sidii shacabka Jubbaland ay dantoodu u noqon lahayd mid laga wada shaqeeyo.
Dhamaan dhinacyadii ka qaybqaatay sidii xal looga gaari lahaa khilaafkii jiray ayuu Madaxweynahu uga mahad celiyay sidii ay u garab istaageen shacabka ree Jubbaland sidii midnimadooda iyo wadajirkooda loo adkayn lahaa.
Mar uu ka hadlayay Khilaafka Jubbaland iyo Dowlada Federaalka ah ayuu sheegay in Jubbaland ay diyaar u tahay wakhti walba in wada hadal lagu xaliyo waxyaabaha lagu kala aragti duwan yahay isla markana Dowlada Federaalku ay qaadato doorkeeda la xiriira isku haynta dadka iyo sidii wadajir loogu wajahi lahaa qorshayaasha hortabinta leh.
Dhinaca kale Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in dhibaatada adduunka saamaysay ee Xanuunka COVID-19 ay tahay mushkilad u baahan in dadku ay raacan fariimaha iyo talooyinka Hay’adaha Caafimaadka dalka, maadama aan wali daawo loo haynina inay dadku kala fogaadan si looga hortago in xanuunkan uu ku faafo Bulshada, isagoo xusay in kala fogaanshaha Bulshada ay ka bilaabato Xarumaha Dowlada, dadkuna ay raacaan tilmaamaha iyo talooyinka howlwadeenada Caafimaadka.
soo dhoweynta Axmed Madoobe iyo Is bedel doonka